China Inopa 30Khz Ultrasound Kucheka Chidimbu cheRobot's Ruoko Kucheka Uchishandisa Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
Kupa 30Khz Ultrasound Kucheka Chidimbu cheRobot's Ruoko Kucheka Uchishandisa
Chinhu Kwete QR-C30Y
Jenareta Dhijitari jenareta
Voltage 220V kana 110V
Kurema kweBlade 1.25kgs
Huremu hwese 11.5Kg
Kushanda Mucheka mucheka
Nheyo yekucheka banga yekushandura ndeyekushandura 50 / 60Hz yazvino kuita 20, 30 kana 40kHz simba remagetsi kuburikidza neiyo ultrasonic jenareta. Iyo yakashandurwa yakakwira-frequency magetsi emagetsi anoshandurwazve kuita mehendi vibration yeiyo imwechete frequency kuburikidza neiyo transducer, uyezve iyo yemagetsi vibration inopfuudzwa kune yekucheka banga kuburikidza ne seti ye amplitude modulator chishandiso iyo inogona kuchinja iyo amplitude. Iyo ultrasonic yerabha cutter inodedera pamwe nehurefu hwayo nehukuru hwe10-70μm, ichidzokorora ka30,000 times (30 kHz) pasekondi (iyo kudedera kweiyo microscopic, iyo inowanzo kuve yakaoma kuona neziso rakashama). Banga rekucheka rinobva raendesa simba rekugashira rakagamuchirwa kunocheka pamusoro peiyo workpiece kuti icheke. Munzvimbo ino, simba rekudengenyeka rinoshandiswa kutema raibhu nekumisikidza iro simba rema molecular erabha uye kuvhura ketani yemolekyuli.
Muchina-wakaiswa ultrasonic yekucheka banga-yekucheka maficha
1. Nyore kushandisa kune zvoga kugadzirwa.
2. 1mm blade ine zvishoma kurasikirwa kwezvinhu.
3. Kurumidza kumhanya, kushanda kwakanyanya uye hapana kusvibiswa.
4. Iyo yekucheka chaiyo yakakwira, uye iyo yerabha zvinhu haina kuremara.
5. Nzvimbo yekucheka ine kutsetseka kwakanaka uye kuita kwakanaka kwekubatana.
6. Midziyo idiki muhukuru uye inogona kushandiswa kucheka nemaoko.
1. Yakasimba kugadzikana: Iyo ultrasonic jenareta inogadzira yemagetsi vibration painenge ichishanda, uye inoshandura iyo kuita mechiniki oscillation uye inoendesa iyo kune yekucheka mapanga uye yekucheka zvinhu. Iyo yekucheka mechina inoitwa, saka hapana unopinza wekucheka pamucheto unodiwa, uye iro reza kupfeka idiki, uye panguva imwecheteyo Iyo yekucheka musoro inogona kutsiviwa neayo yega.
2. Kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Kana banga re ultrasonic rakatemwa, tembiricha yemusoro unocheka yakadzikira kupfuura 50 degrees Celsius, uye hapana utsi uye hwema huchagadzirwa, izvo zvinobvisa njodzi yekukuvara uye moto panguva yekucheka.
3.Kucheka zvakanyatsonaka: Sezvo iyo ultrasonic wave ichichekwa neiyo yepamusoro-frequency vibration, izvo zvinhu hazvizonamatira kumusoro kweiyo chipasa, kungo diki kumanikidza kunodiwa pakucheka, uye izvo zvisina kusimba uye zvakapfava zvinhu hazvina kuremara uye kusakara, uye jira racho rinochekwa uye rinobva rakanamwa. Hazvikonzere kutsemuka.
4. Simple oparesheni: iyo yekucheka banga rakabatana neiyo ultrasonic jenareta, iyo jenareta yakabatana ne220V mains, uye switch inogona kutemwa kutsigira ruoko-rwakabata uye muchina-wakaiswa kucheka.
Pashure: Ruoko Rwakabatwa 40khz Ultrasonic Chikafu Chekucheka Nedigital jenareta Hapana Anonamira banga
Zvadaro: Ultrasonic Cutter ine 35Khz Kakawanda kweKucheka Kwakasiyana Kupindirana kweMatongerwo Ezvinhu